Ithegi: rhuma » Martech Zone
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ukuba ukhe wafunda olu papasho okwethutyana, uyazi ukuba ndiyayidelela kangakanani i-imeyile xa kuthelekiswa neengxoxo zemidiya yoluntu phaya. Ukukhupha amandla apheleleyo alo naliphi na icebo lokuthengisa, ukulungelelanisa loo maphulo kuwo onke amajelo kuya kongeza iziphumo zakho. Akungombuzo wokuchasana, ngumbuzo kwaye. Ngephulo ngalinye kwisitishi ngasinye, ungaqinisekisa njani ukuba ukwanda kwamazinga okuphendula kwisitishi ngasinye onaso. Imeyile? Ekuhlaleni? Okanye
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu IBrightTag, iqonga lokuthengisa elisekwe kwilifu kubathengisi be-Intanethi, ithengile iSignal. Umqondiso yindawo yokuthengisa esembindini yentengiso yesitayile esinqamlezileyo nge-imeyile, iSMS kunye nemidiya yoluntu. Iimpawu zomqondiso zibandakanya: Iileta zeendaba ze-imeyile- ezakhelwe kwangaphambili, iitemplate zeimeyile ezilungiselelwe ukuhamba ukuze uzisebenzise okanye uzenzele ezakho. Umyalezo obhaliweyo-yazisa ngenkqubo esebenzayo kwaye uhambelane neemfuno zesiphatho esiphathwayo. Ukupapashwa kwemithombo yeendaba kwezentlalo-papasha ubume bakho kuFacebook nakuTwitter, usebenzisa ii-URLs ezimfutshane ukulandelela umxholo wakho.
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Rhoqo kwiinyanga ezimbalwa, kufuneka ndidlule kwii-imeyile zam kwaye ndiqale ukucoca yonke i-junk. Ukusuka kumaqonga endiwavavanyileyo, kwizaziso zentlalo kunye neeleta-zebhokisi yam ipakishwe. Ndisebenzisa izixhobo ezikhulu zokunceda ukuyilawula, njengeMeyilestrom, kodwa isengaphandle kolawulo. Unroll.me ilapha ukukunceda uphinde ufumane ulawulo lwebhokisi yakho engenayo. Endaweni yokufumana ii-imeyile ezininzi zokubhalisela imini yonke, unokufumana enye.
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Kule veki kuye kwanyanzeleka ukuba ndichithe ixesha kunye neqela elikwiSproutbox, isixhobo esimangalisayo se-incubator eBloomington, eIndiana. I-Sproutbox yasekwa ngababhekisi phambili abathile abagqibe ngento abayithandayo kwaye babelungile ekuthatheni umbono kwaye bayizisa kwintengiso njengesisombululo. Benza loo nto ngokulingana kwiiprojekthi abagqiba ekubeni bazenze kwintengiso. Ndizokuzimasa namhlanje njengendawo yokugqibela kwiHlumelo labo elilandelayo…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ngaba ababhalisi bakho be-imeyile bacofa kwiiwebhusayithi zakho, uku-odola iimveliso zakho, okanye ukubhalisela imicimbi yakho, njengoko kulindelwe? Hayi? Endaweni yokuba bangaphenduli, bangabhalisi okanye (bakhuphe) bakhalaze? Ukuba kunjalo, mhlawumbi awucacisi ngokucacileyo ukuba ulindeleni.